Mareykanka: Syria Waxa ay Diyaarinysaa Weerar Kiimiko
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurta-galnimada in ciidamada Syria ay diyaarinayaan weerar Kiimiiko oo la mid ah kii bishii April ka dhacay waqooyiga Syria ee dhaliyey in Mareykanka kaga jawaabo duqeymo diyaaradeed.
Bayaan goor dambe oo isniintii kasoo baxay afhayeenka Aqalka cad sean Spicer ayaa uga digay madaxweynaha Syria Bashar al-Assad in haddii ciidamada dowladdiisa ay fuliyaan weerar kale oo Kiimiko, “ In isaga iyo malatarigiisa ay la kulmi doonaan jawaab.”
Ma jiraan wax caddeymo ah oo ku saabsan diyaargarowga weerarka kiimiko oo dowladda Mareykanka ay soo bandhigtay.
Safiirka Mareykanka ee QM, Nikki Haley ayaa barteeda twitter-ka ku sheegtay in weerar kasta oo ka dhan ah shacabka Syria “lagu eedeyn doono Assad, iyo dowladaha Ruushka iyo Iran oo ku taageera inuu dilo dadkiisa.”
Ruushka iyo Iran ayaa ah labada dal ee taageerada ugu weyn siiya Assad, ayaga oo dhanka milatariga ka caawiya dagaalka uu kula jiro mucaaradka Syria iyo mintidiinta kooxda Daacish.
Ma jiraan wax jawaab ah oo Syria, Ruushka iyo Iran ay ka baxiyeen warka cusub ee kasoo baxay Aqalka Cad.